RASMI: Mikel Arteta Oo Cidlo Soo Istaagtay Kaddib Iscasilaad Lama Filaan Ah Oo Uu Ku Dhawaaqay Freddie Ljungberg - Gool24.Net
RASMI: Mikel Arteta Oo Cidlo Soo Istaagtay Kaddib Iscasilaad Lama Filaan Ah Oo Uu Ku Dhawaaqay Freddie Ljungberg
Freddie Ljungberg ayaa iskaga tegay shaqadii uu ka hayay Arsenal ee ahayd tababare ku-xigeennada, kaddib markii uu helay fursado shaqo oo uu isagu ku noqonayo tababare buuxa.
Halyeygan hore ee Arsenal ayaa loo magacaabay inuu si ku-meelgaadh ah u layliyo naadiga markii shaqada laga caydhiyey Unai Emery bishii November 2019, waxaana la dul-keenay Mikel Arteta oo isaguna uu u noqday Freddie Ljungberg.
Freddie Ljungberg oo qayb ka ahaa xiddigihii Arsene Wenger uu hoggaaminayay xili ciyaareedkii 2003-04 ee lagu naanaysi jiray ‘Invincibles’ ee iyagoon hal mar laga adkaanin ku guuleystay horyaalka Premier League, ayaa ku-xigeen u noqday Arteta ka hor intii aanu maanta xidh-xidhanin shandaddiisa.
43 jirkan ayaa sheegay in go’aan uu isagu gaadhay uu kaga tegay shaqada, waxaanu Mikel Arteta u rajeeyey guul isaga oo tilmaamay inay ka horreeyaan waayo wanaagsan oo guulo wata.
“Waxa aan go’aansaday inaan ka tago kaalintaydii tababare-xigeenka kooxda koowaad ee Arsenal, si aan usii horumariyo khibraddayda tababarenimo.” Ayuu yidhi Freddie Ljungberg, waxaanu raaciyey: “Waxaan kooxdan qayb kasoo ahaa tan iyo 1998kii, waxaanan ku faraxsanahay dhamaan fursadaha ay isiiyeen ciyaartoy ahaan iyo tababare ahaanba. Waxa aan Mikel iyo dhamaan kooxda u rajaynayaa guul xili ciyaareedka soo socda. Waxa kale oo aan u mahad celinayaa taageereyaasha sida joogtada ah ii garab taagnaa, waxaanan rajaynayaa in dhamaanteen aynu mar kale si degdeg ah u kulmi doono.”
Ljungberg, waxa kale oo uu soo layliyey kooxaha 15jirrada iyo 23 jirrada ee Arsenal, waxaase uu hadda go’aansaday inuu shaqo buuxda oo tababarenimo ah qabto, inkasta oo aan la bixin wax ishaaro ah oo ku saabsan naadiga uu tegayo.
Agaasimaha ciyaaraha Arsenal ee Edu ayaa isaguna sheegay inay tahay wax laga xumaado in Ljungberg uu ka tago Arsenal, waxaanu yidhi: “Dhab ahaantii waanu ka murugaysanahay inaanu aragno Freddie oo tegaya maadaama aanu ognahay sida uu u jecel yahay Arsenal.”